Khassaare Culus oo Ciidamada Burundi Lagu Gaarsiiyay Weerar Ka Dhacay Sh/Dhexe. – Shabakadda Amiirnuur
July 27, 2019 3:19 pm by admin Views: 103
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta gobolka Shabeelaha Dhexe ku weeraray ciidamada Burundi, waxaana la waramayaa in khasaare kala duwan la gaarsiiyay shisheeyahaas. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Balcad iyo Gololey, halkaasoo lagu helay kolonyo ciidamada Burundi ah.
Askarta Burundi ayaa halkaa ka waday hawllo ay ku xaalufinayeen dhirta iyo beeraha ku yaalla hareeraha wadooyinka, waxaana iyagoo shaqadaasi ku jira qabsaday mowjado weerarro ah oo uga yimid milatariga Xarakada Al-Shabaab.
Ciidamada Burundi ayaa waxaa gaaray khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo saanad laga furtay sida uu saxaafaddu kasoo xigatay taliska ciidanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay sheegeen in Burundiga ay ka gubeen sadax gaadiid ah oo ay kamid yihiin kuwii ay dhirta ku jarayeen, sidoo kalana ka dileen ugu yaraan toban askari, ayna ka furteen saanad milatari oo kala cayn ah.
Shisheeyaha ayaa goobta uga cararay qaar kamid ah meydadkooda, waxaana intooda badan ay dib ugu laabteen xeradii ay kasoo bexeen oo aan sidaa uga fogeyn halka lagu dagaalamay, halka qaarkood ay ku firxadeen duurka iyagoo la baacsanayo.
Ciidamada Burundi ayaa muddo dhowr jeer ah lagu gumaaday gobolka Sh/dhexe xilli ay kamid yihiin ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee ay Mareykanka iyo Qaramada Midoobay soo kireysteen.